Jamhuuriyiintii Oo Iska Fogoyeey Qorshaha Trump Kuna Jaahwareersan Falcelintiisa – Heemaal News Network
Jamhuuriyiintii Oo Iska Fogoyeey Qorshaha Trump Kuna Jaahwareersan Falcelintiisa
Dhowr Jamhuuriyiin ah ayaa ku jahwareersan falcelinta Madaxweyne Donald Trump kadib guuldaradii doorashada. Waxay ka codsadaan inuu ixtiraamo natiijada.
Dadka Mareykanka waxay ceyriyeen kii ugu musuq maasuqa badnaa, ee ugu anshax xumada badnaa, madaxweynihii ugu kartida darnaaa ee soo mara taariikhda Mareykanka, waxaa yiri Steve Schmidt oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo ka tirsan Mashruuca Lincoln.
“Mashruuca Lincoln”, waa guddi hawleed siyaasadeed oo door muuqda ku lahaa Xisbiga Jamhuuriga. Waxay u ururiyeen malaayiin doolar hal ujeedo: si loo hubiyo in Donald Trump uusan afar sano cusub ku helin Aqalka Cad.
Madaxweyne Donald Trump wali ma uusan aqoonsan natiijada doorashada Mareykanka, laakiin taasi waxba kama badaleyso xaqiiqda ah in dadka Mareykanka ay u doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 46-aad ee dalka.
Trump wuxuu bilaabay inuu ka cawdo wax isdaba marin doorashada ka hor inta aysan doorashada bilaaban.
Wuxuu been abuuryaa si uu uga dhigi karo in laga shakiyo doorashada, ayay tiri Vanita Gupta, oo madax ka ah waaxda caddaaladda.
Qareenka Trump Rudy Giuliani ayaa sidoo kale soo jeediyay eedeymo cusub oo ku saabsan musuqmaasuq doorashada ka dib markii lagu dhawaaqay guusha Biden, laakiin ma uusan keenin cadeymo ama wax cadeyn kara tan, eedeymaha waxaa sidoo kale diiday madaxa guddiga doorashooyinka heer federaal ee Mareykanka.
Dacwadahani waa kuwo aan ilko lahayn oo aan sal iyo raad toona lahayn. Waxba ma goosan karaan, ayuu Steve Schmidt u sheegay warbaahinta MSNBC.
Schmidt wuxuu u shaqeeyay ololihii doorashada George W. Bush, Arnold Schwarzenegger iyo John McCain. Wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii mashruuca Lincoln.
Macno ahaan ma jiraan wax aan ilaa hadda arkay oo fursad macno leh u leh saamaynta natiijada doorashada, ayuu yidhi borofisar sharciga yaqaan ah Justin Levitt oo ka tirsan dugsiga sharciga ee Loyala oo la hadlayTIME.
Senator-kii hore ee gobolka Missouri Claire McCaskill ayaa u sheegay MSNBC in Jamhuuriyeyaashu aysan haysan wax ay kaga cawdaan doorashada sanadkan.
Jamhuuriyeyaashu way ogyihiin inaysan haysan wax qiil ah. Waa inay xishoodaan, ayay tiri.
Dhowr xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa iyaguna ka falceliyey soo jeedimaha madaxweynaha iyo eedeymaha ku saabsan natiijada doorashada.
Majiro wax difaac ah oo hadalada madaxweynaha ee caawa, taas oo wiiqaysa hanaanka dimuqraadiyadeed. America way tirisaa codadka, waana inaan u ixtiraamnaa natiijooyinka sidii aan had iyo jeer sameyn jirnay.
Ma jiro doorasho ama qof ka muhiimsan dimuqraadiyadeena, ayuu qoray gudoomiyaha gobolka Maryland ee Larry Hogan.
Qofka kale ee aan ku qanacsaneyn waa Xildhibaan Adam Kinzinger oo jamhuuriya.
Waxaan rabnaa in codadka oo dhan la tiriyo, haa dhamaan codadka sharciga ah (dabcan). Si kastaba ha noqotee, haddii aad walaac daran ka qabto isdabamarin, soo bandhig caddeyn oo maxkamadda la tag. Jooji faafinta warar been abuur ah oo been abuur ah, ayuu qoray Kinzinger.
Paul Mitchell oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa la dhacsan madaxweynaha, laakiin wuxuu aaminsan yahay in natiijada la ixtiraamo.
Haddii qof cadeymo u hayo in wax si khaldan loo qabtay, waa in la soo bandhigaa oo wax laga qabtaa. Wax kasta oo kale waxay dhaawaceysaa daacadnimada doorashadeena waxayna khatar ku tahay dimuqraadiyaddayada.
Aniga qudhaydu waxaan kala kulmay guul iyo guul daro labadaba doorashooyinka. Khasaaruhu aad buu u xanuun badan yahay taas waan ogahay shaqsiyan. Laakiin ummaddeenu waxay dalbanaysaa in hoggaamiyeyaashooda siyaasadeed ay ku aqbalaan guul iyo guuldarro labadaba, nimco iyo biseyl. Cod bixiyeyaashu ha go’aansadaan, ayuu qoray Mitchell.
Diiwangelinta Musharixiinta Madaxweynaha Iyo Kuxigeenka Hir-Shabeelle Oo Bilaabatay
Abiy Axmed Oo Xilka Qaadis Iyo Magacaabis Sameeyey, Xilli Ay Colaadi ka Taagan tahay Gobolka Tigreega.
Heemaal November 30, 2020 November 30, 2020
Puntland Oo Sheegtay In Caawa Wixii ka Danbeeya Farmaajo U Aqoonsanayso Madaxweynihii Hore.
M/Biixi Oo Amray in Xukuumadda Bixiso Lacagta Qaar ka Mid ah Musharixiinta Golayaasha